အခြေအနေအစီရင်ခံစာ – ကိုရီးယား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ တရုတ်ပြည် – Outbreak.Asia
Posted on 16.05.2020 16.05.2020 by Kyaw Swar Aung
ဟောင်ကောင်၊ မကာအို၊ ဗီယက်နမ်၊ ထိုက်ဝမ်၊ မြန်မာ
ဖော်ပြထားတဲ့ နိုင်ငံအားလုံးဟာ COVID-19 ရောဂါကို အမြစ်ဖြတ်ချေမှုန်းပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ လက်ရှိအထောက်အထားအားလုံးက ညွှန်ပြနေပါတယ်။ ဟောင်ကောင်မှ ပြည်တွင်းကူးစက်မှုလုံးဝ မရှိတာ ၂၂ ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ ထိုက်ဝမ်ကတော့ အောင်မြင်တာ တစ်လ ရှိပါပြီ။ စင်ကာပူမှာ ဖြစ်သလိုမျိုး အစုအဖွဲ့တစ်ခု ကျန်ရစ်ခဲ့တာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရေရှည်မှာ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေကတော့ အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေဟာ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်တာ၊ သွားလာကန့်သတ်တာ၊ ဒါမှ မဟုတ် နိုင်ငံတကာ ဆိုက်ရောက်ခရီးသည် အားလုံး ဒါမှမဟုတ် အားလုံးနီးပါးကို ပိတ်ပင်ထားတာတွေဟာ ဘယ်လောက်ကြာကြာလုပ်နိုင်မှာလဲ ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုးမြို့က နိုက်ကလပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစုအဖွဲ့အသစ်တစ်ခုဟာ သိပ်မကြာခင်ကာလက ကိုရီးယားမှာ သတင်းခေါင်းကြီးပိုင်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကူးစက်မှု အသစ်ဟာ နိုင်ငံတကာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ နည်းပါတယ်။ ဒီစာကို ရေးနေတုန်းမှာ လူတစ်ရာကျော်ဟာ အီတေဝန်ကလပ်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လူ ၇၀၀၀ ကျော်ကို ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ စိုးရိမ်စရာ ကောင်းတာက ကလပ်ထဲလာတဲ့ သူတွေရော ကလပ်ထဲ လာမလာ မသေချာတဲ့ သူတွေရော ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရီယားနဲ့ အချိန်ကာလ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ပိုးတွေ့လူနာ သုည ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ထိုက်ဝမ်၊ မကာအို၊ ဗီယက်နမ်၊ မြန်မာ၊ ဟောင်ကောင်နဲ့ အခြား အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ မတူဘဲ ဧပြီလ လလယ်ပိုင်းကနေ မေလဆန်းပိုင်းလောက်အထိ အကြမ်းဖျင်း တစ်နေ့ကို ပိုးတွေ့လူနာသစ် (၁၀) ဦးဝန်းကျင်နဲ့ ကိုရီးယားဟာ ကူးစက်မှု ပြန်စတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ကိန်းဂဏာန်းတွေက ပြသနေပါတယ်။
အဲ့ဒီ ရောဂါကူးစက်မှုကနေ ထိတွေ့မှုကို ခြေရာခံတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်း နှစ်ခု ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ တစ်ခုကတော့ KDCD ဟာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ထိတွေ့မှုကို ဘယ်လောက်ထိ ခြေရာခံနိုင်သလဲ။ လူများစွာဟာ ကိုရီးယားကို ပိတ်ဆို့ခြင်း မလုပ်ဘဲနဲ့ COVID-19 ကို အနိုင်တိုက်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံအဖြစ် ဥပမာပြခဲ့ကြပါတယ်။ ထိတွေ့မှုကို ခြေရာခံခြင်းတစ်ခုထဲနဲ့ မလုံလောက်ခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုရီးယားရဲ့ ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ ပိတ်ဆို့ခြင်းကို မြင်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ အဆိုပါ ကလပ်ဟာ ဂေးကလပ်ဖြစ်ပါတယ်။ နဂိုကတည်းက လူတွေရဲ့ ပြစ်တင်ပြောဆိုတာကို ခံနေရပြီး ဖြစ်တဲ့ ကိုရီယားဂေးလေးတွေရဲ့ နှစ်ကိုယ်ကြားတွေ့ဆုံတာတွေဟာ ထိတွေ့မှု ခြေရာခံ ကွင်းစက်ကို “ ပျက်” သွားစေနိုင်တယ်လို့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
မတ်လအတွင်းမှ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကာကွယ်ရေးအစီအမံတွေ လုပ်ဆောင်ကြတဲ့ တိုင်းပြည်အများအပြားထဲမှာ ဖိလစ်ပိုင်ဟာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ပိုးတွေ့ လူနာသစ်ကူးစက်မှုနှုန်းနဲ့ သေနှုန်းဟာ ငြိမ်သွားခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ လူနာ နှစ်ဆတိုးချိန်ဟာ မတ်လ ၁၁ ရက်မှာ ၂ ရက်ထက်နည်းပြီး ယခုအချိန်မှာတော့ ဆယ်ရက်ကျော် ဖြစ်ပါတယ်။ ငတ်မွတ်ခြင်းကဲ့သို့ ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပူပန်မှုတွေ၊ အခြေအနေ ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ ကြုံရချိန်မှာ ဒူတာတေးအစိုးရဟာ မေလ ၁၆ ရက်ကနေ စတင်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်မှာ ဖြစ်တဲ့ အဆင့်တိုးမြှင့်ထားတဲ့ လူထုသွားလာကန့်သတ်မှု (ECQ) ပြန်လည်ပြင်ဆင်ချက်တစ်ရပ်ကို ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ဖွယ်ကတော့ COVID-19 ဟာ လူဇန်ကျွန်းပြင်ပ ကျေးလက်သေသအတွင်းပိုင်းထဲထိ ထိုးဖောက် ဝင်ရောက်မှု နည်းသေးတယ်လို့ ယူဆလို့ ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မနီလာ အမျိုးသားမြို့တော်ဒေသ (NCR)၊ စီဘူးမြို့နဲ့ ဒါဗာယိုတို့မှာ ECQ ကနေ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ECQ လို့ ခေါ်တဲ့ အရာအဖြစ် အနည်းငယ် ဖြေလျှော့သွားပါလိမ့်မယ်။ အလယ်ပိုင်း လူဇန်နေရာအများစု၊ စီဘူးကျွန်း၊ ယိုဟိုနဲ့ မင်ဒါနာအို တစ်ဝက်ခန့်ဟာ “ ထိန်းချုပ်ခြင်း” အတွက် လူထုသွားလာကန့်သတ်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတာကတော့ စီဘူးဟာ မကြာခင်က တွက်ထားချက်အရ RO ၄ အထက်ရှိတဲ့ COVID-19 ရှိရာ နေရာတစ်ခုအဖြစ် ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ယခုအခါမှာ စီဘူးမြို့ဟာ ပိုးတွေ့လူနာအများဆုံးနဲ့ မြို့အဖြစ် ကွေဇန်မြို့ကို ကျော်လွှားသွားခဲ့ပါပြီ။ သို့သော်လည်း အဲ့ဒါဟာ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုနဲ့ ထိတွေ့မှု ပိုကောင်းလာတာကို ရောင်ပြန် ဟပ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Cebu City Health Department says 96% of their COVID-19 cases are asymptomatic, something they attribute to the early detection of the disease. Doctors, is this necessarily the case? Pre-symptomatic is not the same as asymptomatic, right?
— Atom Araullo (@atomaraullo) May 12, 2020
ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ထားသော ECQ GCQ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ထားသော GCQ
ဘယ်သူတွေ အပြင်ထွက် နိုင်သလဲ။ ပြည်သူတွေဟာ မရှိမဖြစ် အရေးကြီးတဲ့ အစားအသောက်တွေ ဝယ်ယူဖို့၊ အစိုးရက ဆက်လုပ်ဖို့ ခွင့်ပြုထားတဲ့ စက်ရုံတွေကို သွားဖို့ပဲ အိမ်ကနေ ထွက်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် မရှိတဲ့ ရပ်ကွက်တွေမှာ မရှိမဖြစ် ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ အလုပ်အတွက် ပြည်သူတွေကို သွားလာခွင့်ပြုပါ လိမ့်မယ်။ သွားလာတာတွေကတော့ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်ဖြစ်နေပါပြီ။ သို့ပေမယ့် နှာခေါင်းစည်းတပ်တာ၊ ခပ်ခွာခွာနေတာနဲ့ အခြား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။
ဘယ်လို စက်ရုံအမျိုးအစား တွေက ဖွင့်နိုင်သလဲ။ ECQ အောက်မှာ ခွင့်ပြုထားတဲ့ မရှိမဖြစ် အရေးပါတဲ့ စက်ရုံတွေဟာ ယခင်ကလိုပဲ ခွင့်ပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ယခုအခါမှာ အချို့ ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ စီမံဆောင်ရွက်ရေး စက်ရုံတွေဟာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရဲ့ ၅၀ ရာနှုန်းကိုသာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခွင့် ပေးပါလိမ့်မယ်။ အစိုးရရုံးတွေဟာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရဲ့ ၅၀ ရာနှုန်းကိုသာ အလုပ် ဆက်လုပ်စေမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရရုံးနဲ့ အခြားစက်ရုံတွေနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ အမြင့်ဆုံး အနေနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ရဲ့ ၇၅ ရာနှုန်း လည်ပတ် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကနဲ့ အစိုးရကဏ္ဍ (၂) ရပ်လုံးဟာ စွမ်းဆောင်ရည် အပြည့်အဝသုံဂပြီး အလုပ်ကို ဆက်လုပ်နေပါပြီ။ သို့ပေမယ့် နှာခေါင်းစည်း တပ်တာ၊ ခပ်ခွာခွာနေတာနဲ့ အခြား ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုတော့ ကျင့်သုံးရပါတယ်။
သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ ကျောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ သို့ပေမယ့် အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများ အတွက်သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အပြင်မှာ သွားတက်ရတဲ့ အတန်းတွေကတော့ ပြန်မစသေးပါဘူး။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုတွေဟာ အစိုးရအလုပ်နဲ့ ခွင့်ပြုထားတဲ့ စက်ရုံတွေပဲ ဆက်လုပ်ခွင့်ရပါတယ်။
အကန့်အသတ်အနေအထားနဲ့ ကိုယ်တိုင်သွားတက်ရတဲ့ အတန်း အပါအဝင် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တဲ့ သင်ကြားသင်ယူခြင်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုကို ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ အများပြည်သူသုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဟာ ပြန်စတင်နိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ဖြစ်ရပါတယ်။
ပုံမှန် ကိုယ်တိုင်တက်ရတဲ့ အတန်းတွေကို ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနဲ့ ဆက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ရင်းမြစ် – Rappler
ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်နိုင်စွမ်းဟာ မတ်လမှာ တစ်ရက် ၂ ထောင်၊ ဧပြီလမှာ တစ်ရက် ၆ ထောင်ကနေ ယခုအချိန်မှာ တစ်ရက်ကို ၈ ထောင်အထိ တိုးလာပါတဘ်။
မြို့တော်ဝန်ဟာ ကျောင်းအဆောက်အအုံနဲ့ ပဆစ်မြို့က ဟိုတယ်တွေ အသုံးပြုခြင်းလိုမျိုး ဗဟိုထိန်းချုပ်သွားလာကန့်သတ်ခြင်းကို စတင်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှု တစ်ခုစီမှာ ပိုးတွေ့တဲ့ ရာနှုန်းဟာ ကျဆင်းနေပါတယ်။
ပိုးတွေ့လူနာရဲ့ ငါးပုံတစ်ပုံဟာ ကျန်းမာရေးလုပ်သားတွေ ဖြစ်ပေမယ့် ဆေးရုံတွေဟာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းထက် မလွန်သွားဘဲ COVID-19 ကို နိုင်နိုင်နင်းနင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မနီလာဆင်ခြေဖုံးက အစားအသောက် ဖူလုံမှု အခြေအနေကလည်း ထူးထူးခြားခြား ဆိုးရွားသွားတာမျိုး မရှိပါဘူး။
တင်ပြထားတဲ့ ဗီဇ နမူနာကိုလည်း GIDAID ကို ပေးပို့ခဲ့ပြီး အရေအတွက် နည်းချိန်မှာ အားလုံးဟာ နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ စူးစမ်းချင်စရာ ပုံစံကိုလည်း ပြသနေပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဖေဖော်ဝါရီလလယ်ကနေ လကုန်မှာ ကူးစက်ခံရတာကို ညွှန်ပြနေတယ်။ အိန္ဒိယကနေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ECQ ကြောင့် စီးပွားရေး ထိခိုက်မှုကို လျစ်လျူရှုပြီး ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရဖွဲ့စည်းပုံအဆင့်ဆင့်ဟာ ရောဂါကို ထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ နောက်ဆုံးမှာ အမြစ်ဖြတ်ဖို့ လမ်းကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ထားဟန် တူပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလေ့လာမှုဆိုင်ရာ အင်စတီကျုကနေ ထုတ်ထားတဲ့ ခန့်မှန်းချက်ဟာ သူတို့ရဲ့ အားထုတ်မှုကို အားသစ်လောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ECQ ကို စောစော ဖြေလျှော့ပေးခြင်းဟာ အမျိုးမျိုးသော ဖြစ်ရပ်အပေါ်မူတည်ပြီး ဆောင်းဦး ဒါမှမဟုတ် ဆောင်းရာသီမှ အမြင့်ဆုံးထိ ထိုးတက်သွားနိုင်တဲ့ ကူးစက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်တာကို ဆိုလိုတယ်လို့ လေ့လာမှုက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
Here’saforecast released by PIDS for the Philippines, where ECQ has to be relaxed for humanitarian reasons. The numbers will be different, of course, butacomplete re-opening won’t beasecond wave. It’s just unpausing the first wave. https://t.co/3DWyVCEJUX pic.twitter.com/5e07uz4pFz
— dr. trey AKA quarantine evangelist (@Comparativist) April 30, 2020
စောစောက ရေးခဲ့သလိုပါပဲ။ လက်ရှိမှာ ဘယ်တိုင်းပြည်ကမှ လက်ရှိတရုတ်ပြည်ထက် ရောဂါကို အမြစ်ဖြတ်တဲ့ နေရာမှာ ကတိကဝတ်ပြုပြီး အာရုံစိုက်လုပ်နိုင်တာ မရှိပါဘူး။ သူတို့ဟာ ဇန်နဝါရီကနေ မတ်လအထိ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေမျိုး ထပ်ကျော့ဖြစ်ပွားတာကို ဘယ်နည်းနဲ့မှာ ပြန်မလိုချင်တော့ပါဘူး။ COVID-19 ပေါ်လာတာနဲ့ ထိန်းချုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ရနိုင်သမျှအစီအမံအားလုံးကို အသုံးပြုပါလိမ့်မယ်။ သိပ်မကြာခင်က အဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကို ထောက်ခံမှု ပြခဲ့ပါတယ်။ အတည်ပြုဖို့ အမှန်ကို ခက်ခဲခဲ့တဲ့ အရေအတွက် နည်းနည်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဟေလောင်ကျင်းပြည်နယ်မှာ ရုရှားက တင်သွင်းလာတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ လူနာတွေကို တွေ့ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီပြည်နယ်က မြို့တွေဟာ ပိတ်ဆို့တာကို ပြန်လုပ်ချင်လုပ်လိမ့်မယ်။ ပြန်မလုပ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် မြို့အချင်းချင်းကြား သွားလာတာကိုတော့ ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒါဟာ တစ်ခြားမြို့တွေကိုလည်း ပြန့်နှံ့နေမလားဆိုပြီး အစောပိုင်းက စိုးရိမ်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်။ နိုင်ဂျီးရီးယားကနေ ဒုတိယလှိုင်းတင်သွင်းကူးစက်လူနာတွေဟာ အဲ့မှာ နေထိုင်တဲ့ အာဖရိက ပြည်သူအချို့မှတစ်ဆင့် ပြန့်နှံ့လာဟန် ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါဟာ တရုတ်ရဲ့ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်းကို အိပ်မက်ဆိုး မက်စေခဲ့ပါတယ်။ အာဖရိကလူမျိုးတွေကို အိမ်တွေ ဟိုတယ်တွေက နှင်ထုတ်တာ မက်ဒေါ်နယ်ထဲ ဝင်တာကို တားမြစ်တွေကိုတောင်မှ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခြား အလယ်အလတ်မြို့ကြီးတွေဟာ ပိတ်ဆို့တာကို တောင် လုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ အစီရင်ခံစာတွေကို ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
သို့ပေမယ့် စိုးရိမ်ဖွယ်အကောင်းဆုံးကတော့ ဝူဟန်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ လူနာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်ကို စိုးရိမ်ပြီး ဝူဟန်တစ်မြို့လုံးကို ဆယ်ရက်အတွင်း ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မယ်လို့ စီမံနေပါတယ်။ အပြင်ပန်းအမြင်တွေ အရတော့ ဝူဟန်ဟာ မတ်လလယ်လောက်က လူထုကြား ရောဂါကူးစက်မှုအသစ်ကို သုညထိလျှော့ချဖို့ လုပ်သင့်တာမှန်သမျှ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဝူဟန်ဟာ ဧပြီလ ၇ ရက်ထိ ပိတ်ဆို့ထားခဲ့ပါတယ်။ COVID-19 ဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ပျံ့နှံ့သည် ဖြစ်ပါစေ မေလအစောပိုင်းမှာ ပြန်တွေ့တာဟာ အလားအလာအားဖြင့် အမှန်တကယ်ကို ကြောက်မက်ဖွယ်ပါပဲ။ အဲ့ဒါဟာ တရုတ်ပြည်တစ်နေရာကနေလာခဲ့တာ ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ စိုးရိမ်စရာ နည်းပါမယ်။
Categoriesတရုတ်ပြည်, ဖိလစ်ပိုင်, ဟောင်ကောင် Tagsကိုဗစ်, စိန်ခေါ်မှု, တရုတ်ပြည်, တောင်ကိုရီးယား, မကာအို, မြန်မာ, ဟောင်ကောင်, အခြေအနေအစီရင်ခံစာ
Previous PostPrevious COVID-19 ကုသခြင်းဆိုင်ရာ သိပ္ပံအချက်အလက်များနှင့် သိပ္ပံယိုးမှား ယုံတမ်းစကား
Next PostNext အခြေအနေအစီရင်ခံစာ – ထိုင်းနိုင်ငံ